Ndedzipi nzira dzakanakisa dzekusimudzira Yako Webinar?
In 2013, 62% yeB2B yakashandisa webinars kusimudzira zvigadzirwa zvavo, izvo zviri kumusoro kubva ku42% gore rakapfuura. Zviripachena, webinar iri kuwana mukurumbira uye ivo vari kushanda sechinhu chinotungamira chizvarwa chishandiso, kwete chete chishandiso chekushambadzira. Sei uchifanira kuzviisa mukati mechirongwa chako chekushambadzira uye bhajeti? Nekuti webinars chinzvimbo seiri yepamusoro zvemafomati mukutyaira anokwanisa anotungamira.
Munguva pfupi yapfuura, ndanga ndichishanda nemutengi uye ndakazvipira webinar mhinduro, ReadyTalk, pane zvimwe zvemukati zve yakanakisa webinar maitiro uye nei mutengo wega mutungamiriri uchikosha. Kwete chete ini ini ndawana mamwe makuru ewebhu webhu, asi isu tichave tichizadzisa ivo mune yedu pachedu webinar nhepfenyuro inouya ne munharaunda yekutarisa chombo chinotsigira, Meltwater (gara wakatarwa!).
Saka, heano epamusoro gumi webinar kusimudzira matipi iwe aunofanirwa kuteedzera kana uchironga yako inotevera webinar:
Kutanga kusimudzira yako webinar kweinenge vhiki imwe pamberi pechiitiko - Kuti uwane mhedzisiro, tanga mavhiki matatu kunze Nepo ruzhinji rwevanyoreri vako vari kuenda kunonyoresa svondo rewebhu, izvo hazvireve kuti haufanire kutanga kusimudzira kare. Zvinoenderana ne 2013 Webinar Benchmark Chirevo, kutanga kukwidziridzwa kana mazuva manomwe kunze kunogona kuwedzera iwe kunyoresa neinopfuura 36%! Izvo zvikamu zvinotanga kudzikira, nemazuva maviri kusvika manomwe kusvika 2%, zuva rapfuura pa7%, uye zuva re27%.
Shandisa email senzira yako yekutanga kusimudzira iyo webinar - Sekutsvagurudza kwe ReadyTalk, email inoramba iri senzira yepamusoro yekusimudzira webinar, iine 4.46 kubva pa5. Yechipiri yepamusoro nzira yekusimudzira yaive yemagariro enhau, anga angangoita ese maviri mapoinzi akadzika pa2.77. Iwe unogona zvakare kushandisa Webinar kusimudzira masaiti senge Brainy Octopus.
Kana zvasvika kune webinars, 3 ndiyo nhamba yemashiripiti yemakambani eemail akaiswa - Tichifunga kuti uri kutanga webinar kusimudzira kweinenge vhiki imwe kunze, matatu maemail Campaign ndiyo yakakwana nhamba yewebhuinar kusimudzira:
Tumira mushandirapamwe wekutanga kusimudzira webinar yako, uchitaura nezvenyaya yacho uye dambudziko richagadzirisa kune avo vanoteerera mumutsara wenyaya.
Tumira imwe email mazuva mashoma gare gare nemusoro wenyaya unosanganisira chero vatauri vevaenzi kana mutauro unofambiswa nemhedzisiro
Kune vanhu vakatonyoresa, tumira email zuva rechinoitika kuti uwedzere kupinda
Kune vanhu vachiri kuda kunyoresa, tumira email zuva rechinoitika kuti uwedzere kunyoreswa
Waizviziva here? Avhareji chiyero chekushandura che kunyoresa-kuenda-kumusangano ndeye 42%.
Tumira maemail neChipiri, Chitatu, kana China - The mazuva ane vakanyanya kunyoresa ari Chipiri ane 24%, Chitatu ane 22%, uye China ne20%. Namatira kusvika pakati pevhiki kuti uve nechokwadi chekuti maemail ako haatariswe kana kudzimwa.
Waizviziva here? 64% yevanhu vanonyoresa kune webinar svondo yechiitiko chipenyu.
Gadzira webinar yako neChipiri kana Chitatu - Kubva pane Ongororo ye ReadyTalk uye data, mazuva akanakisa evhiki ekugamuchira ma webinar Chipiri kana Chitatu. Sei? Nekuti vanhu vari kubata Muvhuro, uye vakagadzirira kupera kwevhiki neChina.
Gadzira webinar yako pa11AM PST (2PM EST) kana 10AM PST (1PM EST) - Kana iwe uri uine yenyika webinar, saka iyo nguva yakanakisa yekugadzirisa zvirongwa zvevose kune nyika iri 11AM PST (22%). 10AM PST inouya munzvimbo yechipiri ne19%. Ipedyo kusvika paawa yekudya kwemasikati, vanhu vashoma vanofanirwa kunge vari mumisangano kana kubata mangwanani.
Nguva dzose, nguva dzose, gara uine webinar yako inowanikwa pane-inoda mushure mechiitiko (uye kusimudzira kuti iwe uchadaro). - Sekuziva kwedu tese, zvinhu zvisingatarisirwe zvinogona kuuya mune yedu purogiramu Ita shuwa kuti vanyoreri vako vanoziva kuti vanogona kuwana iyo webinar pane-inoda, havafanirwe kuenda kana kana vachida kuiteerera gare gare.
Deredza fomu yako yekunyoresa kune maviri kusvika mana mafomu masimi. - Iko kushandurwa kwepamusoro mafomu ari pakati pe 2 - 4 mafomu minda, uko shanduko dzinogona kuwedzera neinenge 160%. Parizvino, avhareji chiyero chekushandura kana mumwe munhu asvika kune yekumhara peji yewebhuinar ingori 30 - 40%. Kunyangwe zvingaite senge zvinokwezva kukumbira rumwe ruzivo muchimiro kuti ugone zvirinani tarisiro, zvakakosha kuti uvaendese kune webinar pane kuvatyisidzira nemafomu akawanda. Izvo zvinondiunza kune yangu inotevera poindi…
Shandisa polls uye Q&A kuunganidza rumwe ruzivo nezve zvaunotarisira. - 54% yevatengesi vakashandisa mibvunzo kuti vabate vateereri vavo uye 34% vakashandisa sarudzo, maererano neReadyTalk data. Apa ndipo paunogona zvechokwadi kutanga hurukuro netariro yako uye kudzidza zvakawanda nezvazvo. Uye, pakupedzisira…
Kudzokorora mu-chaiyo nguva. - Usati waendesa iyo yepamhepo webinar, ita shuwa kuti wagadzirira kudzosera zvirimo mune chaiyo-nguva yekuwedzera kubatanidzwa uye kukurudzira vamwe kuti vafarire:
89% yevanhu vanoshandura iyo webinar kuita blog blog. Ita shuwa kuti iwe unoronga imwe kuti ubude pakarepo mushure mewebhu webhusaiti, ine chinongedzo chakagadzirira vateereri vewebhu kuti vataure kana vachichida. Yakawedzera tip: Shandisa yakamisikidzwa bit.ly chinongedzo kuteedzera uye kuita iyo url ipfupi.
Pangave uine mumwe munhu pane vako vashandi live-tweet, kana kuronga tweets kuti ubude kunze panguva yewebhu. Iwe unowana kuwanda kwenzvimbo kubatanidzwa panguva yechiitiko.
Iva ne hashtag yakatsaurirwa chiitiko ichi uye rega varipo vazive kuitira kuti vatevere hurukuro.
Zvakanaka, ndizvozvo, vanhu. Ndinovimba aya matipi akareruka anokubatsira iwe mukusimudzira ako emangwana webinars!
Tags: zuva rakanakisa kuve newebhuinarMazuva akanakisa kusimudzira webinarnguva yakanakisa yekuva newebhusaitinzira dzakanakisa dzekusimudzira webinarbrainy octopusmaitiro ekusimudzira webinarmaitiro ekusimudzira yako webinarKushambadzira Webinarkugadziriranzira dzekusimudzira webinarkusimudzira kwewebhuwebinar kusimudzira masaiti
Sei Enterprise Brands Vashandi uye Bhajeti Yemagariro
Iwo 7 Mhando dzeDhijitari Vatengesi
Dec 20, 2013 pa 9: 06 AM
Ndira 17, 2014 na8: 34 PM
Great post Jennifer .. Anodzidzisa zvechokwadi .. Thanks for sharing!
Mar 18, 2014 pa 8: 10 AM
Jenn, ndainakidzwa nekutumira kwako. Chiitiko changu newebinars jibes nezvakawanda zvawataura. Ndiri kuda kuziva, zvisinei, kuziva kuti wakagumisa sei kuti vazhinji vanyoresa vanosaina muvhiki yekupedzisira pamberi pewebhu. Isu tinowanzo tumira kukoka 2-3 mavhiki pamberi penguva, uye kunyoresa kwedu kwakawanda kunouya nekukurumidza mushure mekukokwa kwekutanga. Ndingafarire kunzwa zvakawanda nezve chiitiko chako.
Mar 18, 2014 pa 2: 06 PM
Mhoro Ben! Ndatenda nekutaura kwako uye nemhinduro yako. Ini ndakanyatso kuwana iyo data nezve vanyoresa kubva ON24 webinar bhenji repoti: http://www.on24.com/wp-content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf. Isu tinoonawo kuwedzera patinotumira iyo yekutanga email. Asi, ini ndakaita math, uye iyo yekupedzisira webinar yatakaitisa yaive nevanhu vazhinji kunyoresa mukati mevhiki kupfuura avo vakasaina ipapo mushure mekunge email yabuda. Ndatenda zvakare nemhinduro yako uye ndinovimba zvese zvanaka!
Mar 21, 2014 pa 11: 01 AM
Akanaka matipi. Ndiri kutora webinar yangu yekutanga mumavhiki maviri saka ndichave nechokwadi chekushandisa akawanda eaya matipi matipi sezvandinogona.
Jun 14, 2014 pa1: 47AM
Matipi makuru! Muchokwadi, imwe yeakanakisa rondedzero yewebhuinar kusimudzira matipi andasangana nawo mukutsvaga kwangu! Zvinonakidza kunyangwe vamwe vachataura sei kuti HAZVINOGONA kuita yako webinar replay iwanikwe. Dzimwe nyanzvi dzinoti kana vateereri vako vaziva kuti kuchave nekudzokorodza kunoitwa kuwanikwe, zvidzidzo zvekupinda zviripo.
Gumiguru 7, 2014 na7: 45 PM
Ichi chaive chinyorwa chakanaka kwazvo
Mbudzi 6, 2014 na5: 45 PM
Tiri kuronga kubata webinar gare gare mwedzi uno. Tichashandisa aya mazano kuigadzirira.
Chii chingave chinotonhorera chaizvo kana iwe ukakwanisa kutumira webinar prep chirongwa.
Nov 7, 2014 pa11: 08AM
Richard, ipfungwa yakanaka! Ndichazviisa mumutsetse wedu. Ndatenda!
May 10, 2015 pa 3: 07 PM
yakanakisa post !!!
May 15, 2015 pa 2: 26 PM
Saka ndinofara ndawana tsamba yako! Isu tiri kungo wedzera kuwedzera dzidzo masevhisi kuburikidza newebhuinars uye chaizvo havana zano pekutangira! Iwe unoita here kubvunza zvakananga kana kubatsira nechimwe chinhu chakadai? Isu tiri Apple matekinoroji ekutsigira nekambani yedzidzo pano pakati peFlorida.
May 17, 2015 pa 9: 35 PM
Mhoro Terry! Ini ndichaendesa ruzivo rwako pamusoro paJenn uyo akanyorwa izvi uye anotibatsira neese mawebhusaiti edu!
Jul 4, 2015 na6: 12 PM
Ndinokutendai nechinonakidza chinyorwa. Ndinoona iwe usinga taure manheru ema webinars.
Hazvingave zvakanaka here?
Kana iri bhizinesi repamba remhando ino ingave isiri nguva yakanaka uye inguvai nemazuva zvaungafunga
Jul 19, 2016 pa 11: 10 AM
Matipi makuru Jenn! Nekure kure iyi yaive yakanyanya kunzwisisa webinar-inoenderana posvo yandawana kubva kuGoogle! Dzimwe dzacho dzaive dzisina kupfupika sedzako. Kutenda kune iyo info!
Jul 19, 2016 na2: 14 PM
Ndatenda zvikuru, Iris! Ini ndoda kumutsidzira iyo ya2016, asi ini ndingati aya mamwe matipi asingagumi ekusimudzira webinar. Ndokumbira undizivise kana iwe uine chero mibvunzo! Anofara kubatsira.
Aug 31, 2018 pa 10: 01 AM
Ruzivo rukuru pano Jenn. Ndakaonawo vanhu vachisimudzira mawebhu webhusaiti pasocial media; Facebook ndiyo huru uye yakanakisa. Iwe unogona kuita izvi pane yako pachako account kana kumisikidza bhizinesi account uye unomhanya yakanangwa yakabhadharwa yemagariro midhiya kushambadzira. Kutenda nekugovana!